Baraf dabaylo wata oo Sweden ku dhuftay | Somaliska
Qaybo badan oo ka mid ah Sweden ayaa waxaa maanta ilaa xalay ka dhacayay baraf aad u fara badan oo dabaylo wata. Khasaarooyin kala duwan ayaa la soo sheegayaa in ay ka dhasheen ayadoo la xaqiijiyay in 1 qof uu ku dhintay agagaarka Vårgårda ayadoo dhowr qof oo dhaawacmayna la soo sheegay. Maraakiibtii u safri jiray jasiirada Gotland ayaa la kansalay ayadoo la soo sheegayo in basaska khaar ka shaqeeya magaalooyinka Uddevalla, Lidköping iyo Borås ay joogsadeen. Laanta cimilada la socota ee Sweden (SMHI) ayaa digniin u jeedisay dadyowga degen gobolada Östergötland, Södermanland, Stockholm, Västmanland iyo Uppsala. Digniinta ayaa ah in xaalada cimilada ay qatar ku keeni karto shacabta iyo guryaha. Dadka socotada ah ayaa iyagana looga digayaa in ay is ilaaliyaan markay banaanka socdaan ayadoo la soo sheegayo dad ku dhaawacmay ka dib markii ay dheceen. Dadka baabuurta wata ayaa iyagana laga doonayaa in ay baabuurtooda ku xiraan luguha xagaaga haddii aysan hore u sameynin. Cimilada qatarta ah ayaa la filayaa in ay sii socota talaadada iyo maalinta arbacada.
Baraf dabaylo wata oo Sweden ku dhuftay
Qaybo badan oo ka mid ah Sweden ayaa waxaa maanta ilaa xalay ka dhacayay baraf aad u fara badan oo dabaylo wata. Khasaarooyin kala duwan ayaa la soo sheegayaa in ay ka dhasheen ayadoo la xaqiijiyay in 1 qof uu ku dhintay agagaarka Vårgårda ayadoo dhowr qof oo dhaawacmayna la soo sheegay.
Maraakiibtii u safri jiray jasiirada Gotland ayaa la kansalay ayadoo la soo sheegayo in basaska khaar ka shaqeeya magaalooyinka Uddevalla, Lidköping iyo Borås ay joogsadeen.
Laanta cimilada la socota ee Sweden (SMHI) ayaa digniin u jeedisay dadyowga degen gobolada Östergötland, Södermanland, Stockholm, Västmanland iyo Uppsala. Digniinta ayaa ah in xaalada cimilada ay qatar ku keeni karto shacabta iyo guryaha.
Dadka socotada ah ayaa iyagana looga digayaa in ay is ilaaliyaan markay banaanka socdaan ayadoo la soo sheegayo dad ku dhaawacmay ka dib markii ay dheceen.
Dadka baabuurta wata ayaa iyagana laga doonayaa in ay baabuurtooda ku xiraan luguha xagaaga haddii aysan hore u sameynin. Cimilada qatarta ah ayaa la filayaa in ay sii socota talaadada iyo maalinta arbacada.
Magaalada ugu nolosha fiican Sweden.
Soomaali lagu qiyaamay in ay saxiixaan heshiis koronto